Soo -saareyaasha wax -soo -saarka,
NTN/NSK/KOYO Kubad jeexdin qoto dheer leh 6300series 、 64 ...
● Ma yihiin dhejisyo la kala sooci karo oo leh jid -goobeed dhejisan oo ku jira siddooyinka gudaha iyo dibaddaba.
Waxaa loo qaybin karaa hal saf, saf labalaab ah iyo afar saf oo dhejiska duuban ee duuban sida waafaqsan tirada rollers raran.
Safafka duuban oo duuban oo duuban
Bear Saarrada duudduuban ee isku duuban ee duuban waa saa'idka la kala saari karo.
Easily Si sahal ah ayaa loogu dhejin karaa joornaalka iyo sita lugaha.
Waxay u adkaysan kartaa culayska axial hal dhinac. Oo waxay xaddidi kartaa barokaca axial ee usheeda dhexe marka loo eego kursiga xambaarsan ee hal dhinac ah.
Si aad ah loogu isticmaalo baabuurta, macdanta, biraha, mashiinnada caagga ah iyo warshadaha kale.
Row Double Sawirada rullaluistemadka Tapered
Bear Saqafka rullaluistemadka oo duuban oo labalaaban waa dhismayaal kala duwan
● Markay xambaarsan tahay cillad shucaac ah, waxay xamili kartaa culeys dhinac -dhinac ah
Load Culeysyada isku -dhafan ee xaglaha iyo axial -ka iyo culeysyada torque, kuwaas oo inta badan awood u leh inay qaadaan culeysyo waaweyn oo shucaac ah, ayaa inta badan loo adeegsadaa qaybaha xaddidaya barokaca axial ee labada dhinac ee usha iyo guryaha
Ku habboon codsiyada leh shuruudo adag. Si weyn loogu isticmaalo xarunta hore ee baabuurka
Afar-Saf oo duubis ah oo duuban
Ings Afar-saf oo duubista rullaluistemadka oo duuban leh baaxad ballaaran
Installation Rakibaadda la fududeeyay iyadoo ay ugu wacan tahay qaybo yar
Distribution Qaybinta rarka rollers afar-saf ayaa la hagaajiyaa si loo yareeyo duugga iyo cimriga adeegga
● Sababtoo ah dhimista dulqaadka ballaca gudaha ee giraanta, meelaynta axial ee qoorta duudduuban waa la fududeeyay
Dimensions Cabbiradu waxay la mid yihiin kuwa afar-saf ee caadiga ah ee dhejiska roogga duubka leh oo siddooyin dhexe leh
Structure Qaab dhismeedka gudaha ee saa'idka rullaluistemadka cylindrical waxay qaadataa rullaluuska si loo habeeyo si siman, oo kaydiyaha bareeraha ama xannibaadda ayaa lagu rakibay inta u dhexaysa rollers -ka, taas oo ka hortagi karta rabitaanka rollers -ka ama is -qabqabsiga u dhexeeya rollers -ka, oo si wax ku ool ah uga hortagi kara kororka ee Xuddunta wareegsan.
Capacity Awoodda culeyska weyn, oo inta badan xambaarsan cillad radial ah.
Capacity Awoodda xambaarka radial ee weyn, oo ku habboon culeyska culus iyo culeyska saameynta.
E Iskudheellitirka khilaafaadka hoose, oo ku habboon xawaaraha sare.
Safafka Kaliya ee Row Silsiladaha
Safka keli ah oo rullaluistemadka cylindrical sita oo keliya xoog shucaac, adayg wanaagsan, iska caabbinta saamaynta.
Waxay ku habboon tahay fallaadho gaagaaban oo leh taageerooyin adag, fallaadho leh barokac axial oo ay sababtay dheeraynta kuleylka, iyo qalabka mashiinka oo leh sahayda la fujin karo rakibidda iyo kala -soocidda.
Mainly Waxaa inta badan loo adeegsadaa matoor weyn, dunmiiqa qalabka mashiinka, mashiinka hore iyo gadaal gadaal usha taageersan, tareenka iyo rakaabka dariiqyada baabuurka rakaabka taageeraya usha, mashiinka naaftada mishiinka, sanduuqa cagafyada baabuurta, iwm.
Row Double Sawirada rullaluistemadka dhululubo
Waxay leedahay dalool gudaha ah iyo daloolka gudaha oo laba qaab ah.
● Wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab -dhismeed is haysta, adayg weyn, awood qaadasho weyn iyo cillad yar ka dib culeyska.
Also Waxa kale oo uu hagaajin karaa oggolaanshaha waxoogaa wuxuuna fududeyn karaa qaab -dhismeedka aaladda meelaynta si loogu rakibo fudud iyo kala -bax.
Afar-saf oo saa'idka rullaluistemadka dhululubada ah
● Afar saf oo rullaluistemadka rullaluistemadka cylindrical leeyihiin khilaaf hoose oo ku habboon wareegga xawaaraha sare.
Mainly Waxaa inta badan loo adeegsadaa mashiinnada wax lagu rogo sida warshad qabow, dhagax kululaynta iyo mishiinka biilka, iwm.
Bearing Raadintu waa qaab -dhismeed gooni ah, giraanta xambaarsan iyo qaybaha jirka oo duuban ayaa si ku habboon loogu kala sooci karaa, sidaa darteed, nadiifinta, kormeerka, rakibidda iyo kala -saaridda sita ayaa aad ugu habboon.
Bear Rakibayaasha rullaluistemadka spherical waxay leeyihiin wax-qabad is-toosin otomaatig ah
● Marka lagu daro xamuulka shucaaca, waxay sidoo kale xamili kartaa culeyska axial bidirectional, ma qaadi karto culeys saafi ah
Waxay leedahay iska caabin saamayn fiican leh
Ku habboon qaladka rakibidda ama leexashada usheeda dhexe ee ay sababeen munaasabadaha qaladka xagasha
Capacity Awoodda xambaarsan culeyska sare
Cross Qaybta isgoyska oo yar
Size Cabbirka dhexroorka gudaha iyo awoodda rarku waxay la mid yihiin noocyada kale ee dhejiska, dhexroorka dibadda ayaana ugu yar
Rullaluislaha rullaluistemadka saa'idka
Has Waxay leedahay saamayn riixid
Load Culeyska axial
● Xawaaruhu wuu hooseeyaa
Waxaad leexan kartaa leexasho
● Codsiga: qalabka mashiinnada baabuurta iyo baabuurta xamuulka qafiifka ah, isjiidka iyo basaska laba iyo saddex taayir